Dastabej » सर्वेक्षणले देखाएझैं बाइडेनले ट्रम्पलाई जित्लान् त ?
सर्वेक्षणले देखाएझैं बाइडेनले ट्रम्पलाई जित्लान् त ? – Dastabej
सर्वेक्षणले देखाएझैं बाइडेनले ट्रम्पलाई जित्लान् त ?
दिनेशजंंग शाह (ईकान्तिपुर)
न्युयोर्क — सन् २०१६ । नोभेम्बर ९ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना तीव्र गतिमा हुँदै थियो । चुनावी नतिजाको पखाई, चासो र चिन्ता अत्यधिक थियो । यसैक्रममा बिहान दुई बजेर २९ मिनेटमा एसोसिएट प्रेस ९एपी० ले समाचार ‘ब्रेकिङ’ गर्‍यो (‘विस्कन्सिन राज्यमा डोनाल्ड जोन ट्रम्प विजयी । ट्रम्प अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति निर्वाचित ।’ यो समाचार ब्रेक हुँदासमेत न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा हिलारी क्लिन्टनको चुनाव जित्ने सम्भावना ८४ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो । चुनावी दिन, नोभेम्बर ८ को न्युयोर्क टाइम्सको प्रिन्ट संस्करणको पहिलो पेजमै लेखिएको थियो, ‘ट्रम्पको जित्ने सम्भावना १५ प्रतिशत । ’
यद्यपि अमेरिकामा सन १९३० को मध्यदेखि योजनाबद्ध सर्वेक्षणहरु भएको पाइन्छ । एकाध रुपमा सर्वेक्षणहरु असफल भए पनि, प्रायस् सर्वेक्षणहरु सही नै हुन्छन् भन्ने आम मान्यता छ । तर पनि ट्रम्पको त्यो जितले, यसपटकको सर्वेक्षणको विश्वसनीयतामाथि शंका उत्पन्न गराएको स्पष्ट छ । त्यसैले पनि सन २०१६ को तुलनामा यसपटकको निर्वाचनको सम्भावित परिणामबारे विश्लेषकहरु अलि हच्चिएका छन् ।
यो बाहेक, सन १९८० को जिम्मी कार्टर र रोनाल्ड रेगनको निर्वाचनमा पनि अधिंकाश सर्वेक्षणहरुले रेगनले एकदेखि दुई प्रतिशतको झिनो अन्तरले जित्ने आकलन गरेका थिए । तर अनुमानविपरीत रेगनले ठूलो अन्तरले जिते । प्रायस् अमेरिकामा सर्वेक्षणहरु मिडिया र विश्वविद्यालयका रिसर्च विभागले संयुक्त रुपमा गर्ने गर्छन् । फोन र अनलाइनका माध्यमबाट दुई सयदेखि एक हजारसम्मको संख्या छनोट गरिन्छ । जति धेरै संख्या, त्यति नै सर्वेक्षण विश्वसनीय हुने विश्वास गरिन्छ । चार वर्षअघिको सर्वेक्षणहरु किन गलत भन्ने विश्लेषणमा मूलतस् एउटै निष्कर्ष निक्लिएको थियो । त्यतिबेला अधिंकाश सर्वेक्षणहरु, राज्यहरुको नतिजाभन्दा बढी राष्ट्रिय रुपमा केन्द्रित भएको बताइएको थियो । त्यतिबेला सर्वेक्षणलाई बढी नै सामान्यीकरण गरिएको बताइन्छ । हिलारी क्लिन्टनले पाएको लोकप्रिय मतलाई सर्वेक्षणले सही साबित गरे पनि, रणभूमि राज्यहरुको नतिजामा उनीहरु चुके । जसले नतिजालाई निर्धारण गर्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, मतदानको अन्तिम दिन, ट्रम्पका सर्मथकहरुको उर्लंदो भेललाई सर्वेक्षणहरुले नजरअन्दाज गरे । लस एन्जलस टाइम्स र साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको सर्वेक्षणले मात्र ट्रम्पले जित्ने अनुमान गरेका थियो ।
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार ११:३१ प्रकाशित